UNGAMFUMANA NJANI UMLAWULI WAKHO WETSHATI | I-LUNAR ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Ungamqonda njani uMlawuli wakho weTshati yokuvumisa ngeenkwenkwezi (+Isibali soMlawuli weTshati)
IKhatyhuleyitha yoMlawuli weTshati yasimahla: fumana iplanethi elawula uphawu lwakho olunyukayo kunye nendlela umlawuli wakho wetshathi eyichaphazela ngayo itshathi yakho yokuzalwa.
Ukuvumisa ngeenkwenkweziNge-6 Okthobha, 2021
Ngaba ujonge loo ndawo kwitshathi yakho yokuzalwa ebonakala ngathi iqhuba inqanawa? Unokuba nomdla wokwazi ukuba uphawu lwakho olunyukayo luphethe isitshixo sotyikityo lwakho lwenyani lokuvumisa ngeenkwenkwezi!
Wonke uphawu lwe-zodiac luwela phantsi kweempembelelo zeplanethi eyahlukileyo - eyaziwa ngokuba ngumlawuli weplanethi. (Umzekelo: iLanga lilawula uLeo, iNyanga ilawula uMhlaza, kwaye iMercury ilawula zombini iVirgo kunye neGemini) . Nganye kwezi planethi ibangela ukuba iimpawu ziziphathe ngendlela eyahlukileyo kwitshathi yakho kunye nokuqonda ukuba yeyiphi iplanethi ephenjelelwa luphawu lwakho olukhulayo. ingabonisa ukuba yeyiphi indawo kwitshathi yakho enempembelelo enkulu kuwe kubomi bakho bonke. Kungenxa yokuba uphawu lwakho olukhulayo lubekwe kwindlu yokuqala yokuzazisa kunye nobuntu.
Ungamfumana njani uMlawuli wakho weTshati
Ukufumana irula yakho yetshathi kulula! Umlawuli wetshati yakho yiplanethi elawula uphawu kwindawo enyukayo. Nje ukuba usazi uphawu lwakho olukhulayo, inyathelo lokuqala kufuneka lijonge uphawu lwezodiac kunye nezindlu ezili-12 zokuvumisa ngeenkwenkwezi ezihlala kwindawo enyukayo. Oku kuya kukunceda ukuba ukhokele ukuba yeyiphi iplanethi kwitshathi yakho yokuzalwa ingumlawuli wakho wetshathi.
Kule bhlog - siza kusebenzisa umbusi wendabuko weScorpio, i-Aquarius, kunye nePisces ekumiseleni ulawulo lwetshathi.
Gqibezela uLuhlu lweempawu eziKhuphukayo + Abalawuli beTshati
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyi-Aries, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iMars yakho, iplanethi elawulayo ye-Aries, ikhona. Indawo yakho yeMars yirula yakho yetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiTaurus, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iVenus yakho, iplanethi elawulayo yeTaurus, ikhona. Ukubekwa kwakho kweVenus ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiGemini, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iMercury yakho, iplanethi elawulayo yeGeminis, ikhona. Ukubekwa kwakho kweMercury ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo nguMhlaza, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine uphawu lwakho lwenyanga, iplanethi elawulayo yeCancers, ikhona. Umqondiso wakho weNyanga ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo nguLeo, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine uphawu lwakho lwelanga aka Leos 'iplanethi elawulayo, ikhona. Umqondiso wakho weLanga ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiVirgo, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iMercury yakho, iplanethi elawulayo yeVirgos, ikhona. Ukubekwa kwakho kweMercury ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiLibra, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iVenus yakho, iplanethi elawulayo yeLibras, ikhona. Ukubekwa kwakho kweVenus ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiScorpio, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iMars yakho, iplanethi elawulayo yemveli yeScorpios, ikhona. Indawo yakho yeMars yirula yakho yetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiSagittarius, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iJupiter yakho, iplanethi elawulayo yeSagittarius, ikhona. Ukubekwa kwakho kweJupiter ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiCapricorn, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iSaturn yakho, iplanethi elawulayo yeCapricorns, ikhona. Ukubekwa kwakho kweSaturn ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyi-Aquarius, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iSaturn yakho, iplanethi elawulayo yemveli ye-Aquarius, ikhona. Ukubekwa kwakho kweSaturn ngumlawuli wakho wetshathi.
Ukuba uphawu lwakho olukhulayo luyiPisces, jonga kwaye ubone ukuba yeyiphi indlu kwaye usayine iJupiter yakho, iplanethi elawulayo yemveli yePisces, ikhona. Ukubekwa kwakho kweJupiter ngumlawuli wakho wetshathi.
Kukho iimeko apho unokuba nenye iplanethi ngaphandle komlawuli wakho wetshathi odibanisa ukunyuka kwakho. Kwezinye iimeko iplanethi inokubamba ngakumbi kwitshathi yakho. Okukhona ukufutshane i-orb yokudibanisa, kokukhona uya kuziva unamandla ngakumbi impembelelo.
fumana inyanga yam kunye nophawu oluphumayo
Enye ingongoma yokudideka yimiqondiso enabalawuli beeplanethi ezimbini: iScorpio, i-Aquarius, iPisces:
IMars kunye nePluto elawula iScorpio
ISaturn kunye neUranus elawula uAquarius
IJupiter kunye neNeptune ezilawulayo Pisces
Ngaphambi kokufunyanwa kweUranus, iNeptune nePluto, izazi ngeenkwenkwezi zachaza uSaturn, uJupiter noMars ngokulandelelanayo njengabalawuli abaphambili bale miqondiso. Izazi zeenkwenkwezi zaseNtshona ziye zatshintsha ubukhulu becala ezo lawulo zindala ngokufunyanwa kweplanethi entsha, kodwa abaninzi bacebisa ukuba usebenzise umlawuli wemveli xa ujonge itshathi yakho yokuzalwa. Oku kungenxa yokuba iiplanethi zakho (i-Mars, iSaturn, kunye neJupiter) ziyahluka ngakumbi kumntu nomntu - kwaye zizodwa kuwe.
ucristiano ronaldo ukucheba iinwele
iinwele ezimfutshane ezigobileyo zamadoda